You maara ihe dị iche na eriri carbon na faiba glaasi? I makwa na otu onye ka ibe ya mma?
Faiba glaasi bụ n'ezie okenye nke ihe abụọ. Emepụtara ya site na iko na-agbaze ma na-amịpụ ya n'okpuru nrụgide dị elu, wee jikọta eriri ihe ndị na-esi na ya na resin epoxy iji mepụta ihe a maara dị ka rọba siri ike (FRP).
Carbon fiber nwere carbon carbon a na-ejikọta ọnụ na agbụ ogologo. A na - ejikọta ọtụtụ puku eriri iji mepụta akwa (aka ụrọ nke eriri). Enwere ike ijikọ akwa ndị a ọnụ iji mepụta akwa ma ọ bụ gbasaa iji mepụta ihe "Unidirectional". N'oge a, a na-ejikọta ya na resin epoxy iji mepụta ihe niile site na tubing na efere dị mbadamba iji gbaa ụgbọ ala na Satellites.
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịmara na fiberglass na raw na carbon fiber na-egosipụta njirimara njikwa yiri ya ma nwee ike ịdị ka ya ma ọ bụrụ na ị nwere fiberglass ojii. Ọ bụghị ruo mgbe e mepụtara ka ị ga-amalite ịhụ ihe na-ekewa ihe abụọ ahụ: ya bụ ike, nkwesi ike na obere ịdị arọ (eriri carbon dị ntakịrị karịa eriri iko). Maka ma otu onye ka ibe ya mma, azịza ya bụ 'mba'. Ihe abụọ a nwere uru na ọghọm ha dabere na ngwa ahụ.
Faiba glaasi na-agbanwe agbanwe karịa carbon eriri na bụ banyere 15x obere ọnụ. Maka ngwa ndị anaghị achọ isi ike - dịka tankị nchekwa, mkpuchi ụlọ, okpu agha, yana akụkụ ahụ - faiba glaasi bụ ihe kachasị mma. A na-ejikwa faiba glaasi eme ihe ugboro ugboro na ngwa ndị dị elu ebe ọnụ ala dị ala bụ ihe kacha mkpa.
Carbon eriri n'ezie na-enwu na-akwanyere ya ike ọdụdọ. Dị ka raw fiber ọ dị ntakịrị ike karịa fiberglass, ma ọ na-esiwanye ike mgbe ejikọtara ya na resins epoxy kwesịrị ekwesị. N’ezie, eriri carbon siri ike karịa ọtụtụ ọla mgbe emere ya n’ụzọ ziri ezi. Nke a bụ ihe mere ndị na-emepụta ihe niile site na ụgbọ elu ruo n'ụgbọ mmiri na-anabata eriri carbon karịa ihe ndị ọzọ na metal na fiberglass. Carbon fiber na-enye ohere maka ike kachasị ike na ibu dị ala.
Ebe a na-akọwa ogologo oge dị ka 'ike', faiba glaasi na-apụta onye mmeri. Ọ bụ ezie na ihe niile dị na thermoplastic siri ike nke ukwuu, ikike fiberglass iji guzogide ntaramahụhụ ka ukwuu metụtara mgbanwe ya. Carbon eriri bụ n'ezie isiike karịa faiba glaasi, ma na rigidity pụtakwara na ọ bụghị dị ka inogide.
Ahịa maka eriri carbon na fiberglass tubing na akwa akwa amụbaala nke ukwuu kemgbe afọ. Site na nke ahụ, a na-eji ngwa fiberglass eme ihe n'ọtụtụ ngwa ngwa, nsonaazụ ya bụ na emepụtara fiberglass ọzọ na ọnụahịa dị ala.
Na-agbakwunye na ọdịiche ọnụahịa bụ eziokwu na ịmepụta eriri eriri carbon bụ usoro siri ike ma na-ewe oge. N’aka nke ọzọ, iko gbazee maka ịkpụzi faiba glaasi yikarịrị. Dị ka ihe ọ bụla ọzọ, usoro siri ike karị bụ ihe dị oke ọnụ.
Na njedebe nke ụbọchị, faiba glaasi tubing adịghị mma ma ọ bụ ka njọ karịa carbon fiber ọzọ. Ngwaahịa abụọ ahụ nwere ngwa maka nke ha dị elu, ya niile gbasara ịchọta ihe kwesịrị ekwesị maka mkpa gị.